Anitech Stereo Speaker SK212 (Black) ~ ICT.com.mm
HomeAnitech Stereo Speaker SK212 (Black)
Anitech Stereo Speaker SK212 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Bar Code: 3410411214182, Brand: Anitech, Body Material: Plastic,6watt, Impendane: 40 ohm, Frequency: 120Hz-18KHz, Button On-Off and adjustable volume, LED status indicator, USB powered and jack size 3.5... [Learn more]
Bar Code: 3410411214182,
Body Material: Plastic,6watt,
Impendane: 40 ohm,
Frequency: 120Hz-18KHz, Button On-Off and adjustable volume, LED status indicator, USB powered and jack size 3.5 mm, 2.25-inch speaker driver to deliver the quality sound, Designed to sound great without taking upalot of room on your table or desk
စတီရီယို သံစဉ်တွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်နားထောင်ရင်း အပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် Anitech အမှတ်တံဆိပ် Stereo Speaker SK212 (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။6W စပီကာနှစ်လုံး ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် 2.25” ရှိတဲ့ Speaker Driver ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ စပီကာကိုယ်ထည်မှာ LED အချက်ပြမီးနဲ့အတူ ပါဝါအဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်နဲ့ အသံတိုးချဲ့နိုင်တဲ့ ခလုတ်တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝါအသုံးပြုမှုအတွက် USB နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး 3.5 mm အရွယ်အစားရှိ Jack ပေါက် တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ အသံထွက်အားကောင်းအောင် ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် မိမိရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ နေရာမစားဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Bar Code: 3410411214182
Impendane: 40 ohm
USB powered and jack size 3.5 mm
2.25-inch speaker driver to deliver the quality sound
Not so good but not so bad. Sound quality …
Sound quality is stable in low volume.
Butalittle messy in high volume.
Last but not least, this is good at its price.